Inona marina moa no andro tokony hivavahana any am-piangonana : Asabotsy ve sa Alahady | Madagascar features website
Tuesday, July 31, 2012 - 10:19
Misy zavatra maromaro hita fa niova, avy any amin'ny Testamenta Taloha mankaty amin' ny Testamenta Vaovao :
- Anankiray amin' ireo dia momba ny fanatitra ( fanatitra dorana, fanatitra alatsa-dra, fanatitra noho ny ota, fanati-pihavanana, fanatitra ahevaheva, fanatitra aidina, ... (Eks:20:22-25 ; Lev:23:37).
- Toy izany koa ny Tempoly ( Jao:4:21-24 ; Apk:21:22)
- Toy izany koa ny Sabata, sy zavatra maromaro momba ny fombam-pivavahana, araka izay fakafakaina ao amin' ny Epistily ho an' ny Hebreo ( Hebreo:3-10 ; Apk:21:5 ).
Ilàna fandinihana lalina ny Baiboly iray manontolo ny momba ireo zavatra niova ireo, fa tsy azo raisina an-tendrony fotsiny, toy ny fanaon' ny sasany, izay mampiasa ny andinin-tSoratra Masina amin' ny tsy izy (jereo ohatra ny Matio:4:5-10).
Ireny zavatra izay tao amin' ny Testamenta Taloha ireny mantsy dia "tandindona" ihany. Izany hoe fahitana ny sarintsarin' izay zavatra mbola ho avy sy ho tanteraka aty amin' ny Testamenta Vaovao. Koa nahoana moa no mbola hiaina amin'ny aloka ihany raha ohatra ka efa tonga ny tena izy ?
Jesosy tenany koa dia nilaza hoe : "Indro havaoziko ny zavatra rehetra", ary Izy dia nifandona matetika tamin' ireo mpitondra fivavahana Jiosy momba io resaka io.
Ny andro Sabata :
Ny andro Sabata teo amin' ny Jiosy dia tsy hafa fa ny andro Asabotsy. Io no andro faha-7, satria ny herinandro dia manomboka Alahady (andro voalohany) ary miafara amin' ny Asabotsy (andro fahafito, fitsaharana).
Ao amin' ny Fiandohana (Genesisy), raha vao vita ny asa famoronana, dia natokan' Andriamanitra ho andro "fitsaharana" ny andro fahafito.
Ny hevitra ngezabe ao ambadiky ny Sabata, hatramin'ny voalohany, dia ny "fitsaharana" fa tsy ny andro akory.
Ao amin'ny Romana:14:5-6 dia misy teny izay milaza mazava tsara fa tsy ny andro akory no zava-dehibe fa ny fanomezam-boninahitra an' Andriamanitra.
Rehefa tonga olona tety an-tany Jesosy, ka nampianatra, dia nanambara Izy fa "Tompon' ny Sabata" ; izany hoe manana fahefana amin' ny Sabata Izy (Marka:2:27-28 , Lioka:6:5 ).
Ny tena anton-diany tety moa dia ny hanatanteraka ny fanafahana antsika amin' ny ota, izay lasa nampisaraka antsika amin' Andriamanitra. Koa dia notanterahiny tamin' ny fitsanganany tamin' ny maty (Paska) io asa lehibe fanavotana antsika io.
Io andro Paska io (Alahady) dia nantsoin' ny Fiangonana Kristiana voalohany hoe : "Ny Andron' ny Tompo".
Ary satria noheverina ho zava-dehibe loatra izany fanavotana antsika mpanota izany, dia izay no nahatonga azy ireo hanokana io andro io ho andro fivavahana ( 1Kr:16:1-2, Asa:20:7 ), satria tsy ny andro intsony no zava-dehibe fa ny fitsaharana omen'i Jesosy eo amin'ny fanatrehany.
Izany no nahatonga ny kristiana maro hivavaka amin'ny andro Alahady fa tsy Asabotsy, satria aminy dia manome voninahitra an' Andriamanitra kokoa ny mankalaza ilay andro nitsanganan'i Kristy, ka nanomezany fitsaharana izay rehetra nitambesaran' ny entana mavesatry ny fahotana.
Ankoatr' izay, Jesosy tenany koa dia nitarika fotoam-pivavahana tamin' ny andro Alahady, araka izay voalaza ao amin' ny Jaona:20:19-28.
Tsy fihaonana tsotra tamin'ny mpianatra io voatantara ao io, fa tena fanompoam-pivavahana notarihin'i Jesosy tenany tamin'ny mpianany, ary dia naverina in-droa Alahady mifanesy.
Raha fakafakaina io fotoam-pivavahana io dia toy izao :
- Ilay "Tompon' ny Sabata" mihitsy no NANANGONA SY NAMPIVAVAKA ny mino azy tamin'ny andro voalohany (izany hoe "Alahady" ).
- Ny litorjia dia miantomboka amin'ny fanomezana fiadanana,
- Ny toriteny dia mifototra amin'ny asam-pamonjen'i Jesosy, tamin' ny alalan' ny fanehoany ny holatry ny nanomboana ny tenany teo amin' ny hazofijaliana),
- Ary dia nofaranana amin' ny fanirahana ny Apostoly.
Koa dia efa fanaon'ny Fiangonana Kristiana hatramin'ny voalohany mihitsy io mivavaka Alahady io, satria ny nataon'i Jesosy ihany no narahin'ny Apostoly sy ireo Fiangonana Kristiana voalohany, ary dia narahin'ny Fiangonana maro mandrak' ankehitriny koa.
Raha lazaina amin' ny fomba tsotra dia ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia nanome hevitra vaovao ny Sabata. Na izany aza anefa dia tsy manameloka ny olona izay mivavaka amin'ny andro Asabotsy isika; tsy tokony hisy hifampitsara amin' io resaka andro io, araka izay voalaza ao amin'ny Kol:2:16-17 ; satria ny hoe "hanamasina azy" no tena zava-dehibe ao amin' ny Didy fahatelo.
Ny dikan' io dia ny hoe "manokana izany andro izany ho an' Andriamanitra, hihaonana amin' Andriamanitra" ; ka rehefa mihaona amin' Andriamanitra ilay olona na Alahady io, na Asabotsy, na Alatsinainy ... dia manaja ny didy fahatelo izy izay.
Ho fehiny, dia tsahivina eto fa tokony hotanterahintsika ilay tenin' i Jesosy ao amin' ny Lioka:18:1-8 izay milaza fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka ( Alahady - Alatsinainy - Talata - Alarobia - Alakamisy - Zomà - Asabotsy).
Ary faranany amin' ny teny hoe : "Kanefa raha avy ny Zanak' olona, moa hahita finoana ety an-tany va Izy ?" (ny faharetana mivavaka dia midika hoe finoana).
Aoka àry isika hanahaka ireo kristiana voalohany izay nivavaka isan'andro, fa tsy voafehin'ny andro anankiray fotsiny ( Asa:2:46 ).
Mivavaha, ka aza mitsahatra ( 1Ts:5:17 ) ary aoka ho aminao anie ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompon'ny Sabata.